We are very happy to see when Daw Aung San Suu Kyi asachairperson and Ko Min Ko Naing and Ko Ko Gyi as the members in the inquiry commission | democracy for burma
We are very happy to see when Daw Aung San Suu Kyi asachairperson and Ko Min Ko Naing and Ko Ko Gyi as the members in the inquiry commission
tags: 88 Generation Students, BDC, Burma, Burma Democratic Concern, Daw Aung San Suu Kyi, inquiry commission, Ko Ko Gyi, Ko Min Ko Naing, Ladpadaung case, Myanmar, NLD
မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ဌေးကြွယ်နှင့် မြအေး စသည့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများသည် ညနေ ၅း၃၀ နာရီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြပြီး တစ်နာရီကျော်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာတွင် လက်ပံတောင်းတောင် အရေးကိစ္စများအပါအ၀င် နိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများနှင့် ကိစ္စရပ်များကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၎င်းနောက် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသော မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ဌေးကြွယ်နှင့် မြအေးတို့သည် ၆း၅၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်သို့ ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
BDC — 88 should work cooperating together with Daw Aung San Suu Kyi. Especially in this crisis. This is all about collective leadeship of democratic groups under the leadership of Daw Aung San Suu Kyi. This is all about the team work. We have really respected Ko Ko Gyi and 88-GS for their decisive leadership with regards to Arakan crisis and we still do today. We are very happy to see when Daw Aung San Suu Kyi asachairperson and Ko Min Ko Naing and Ko Ko Gyi as the members in the inquiry commission but our joys were short lived when we see the statement from 88-GS saying that they have no intention to participate in the commission. Whatawonderful world!
← Monks and people protest at China Embassy,Yangon-photos
President Office Notification:Formation of Investigation Commission Letpadaungtaung project-english →